आफ्नो खेल नहुँदा के गर्छन् विश्वकपमा फ्रान्सेली खेलाडीले ? :: NepalPlus
दिनमा बढिमा तिन खेल हुन्छन्, विश्वकपमा अहिले । हरेक दिन हरेक देशको खेल पर्दैन । खेल नखेल्ने दिन विश्वकपमा खेल्ने फ्रान्सेली खेलाडीहरुले के गर्छन् ? कसरि बिताउँछन् ? के ति हरेक दिन अरु देशको खेल हेर्न रंगशालानै जान्छन् ? मासिक लाखौं युरो कमाउने विश्व कपका खेलाडीको दिनचर्या कस्तो हुन्छ ? धेरैलाई कौतुहल लाग्ने विषय हो यो ।
आउने बिहिवार फ्रान्सले डेनमार्कसित खेल खेल्दै छ । त्यो खेलकालागि लाखौं लाख फ्रान्सेलीहरु कुरेर बसिरहेका छन् । खेल रसियाको काजान वा निजिनी नोभगोरो मध्ये एउटा रंगशालामा हुने छ । बिहिवारको खेल हेर्न हजारौं फ्रन्सेलीहरु मस्को पुगिसकेका छन् । कोहि जाने अन्तिम तरखरमा छन् । सर्वसाधारण र खेलप्रेमी मात्रै होइन, झण्डै दुई दर्जन खेलाडी र खेलको प्राविधिक पक्ष हेर्ने, चिकित्शक लगायतका विशिष्ठ ब्यक्तिहरुका साथी, छिमेकी, गुरुहरु, परिवारका सदस्यहरुको संख्यानै हजारौं हुन्छ । खेल नहुने दिन खेलाडीहरु जहाँ हुन्छन् त्यहाँ तिनका आफन्तहरु भेटघाट गर्न, शुभेच्क्षा दिन र हौसला प्रदान गर्न पुग्छन् । अहिले पुगिरहेका छन् ।
फ्रान्सेली टिम मस्कोको इस्त्रा नदीको छेउमा पर्ने इस्त्रा भन्ने ऐतिहासिक ठाउँमा बसिरहेको छ । इस्त्रा मस्कोबाट ४० किमीको दूरीमा पर्छ । फ्रान्सेली खेलाडीहरुकालागि अहिले हरेक खाना, प्रत्येक क्षण, हरेक घण्टाको थकाई, निन्द्रको हिसावकिताब हुन्छ । महत्वपूर्ण छ ।
उनीहरु हरेक दिन आफ्नो टोलीबिच फूटबल खेल्छन् । कहिलेकाहिँ आफूले खेलेको खेल भिडियो रेकर्ड गरेर पछि हेर्छन् । कहाँ कहाँ गल्ति र कमजोरी भयो । कसरि राम्रो गर्न सकिन्छ । आफ्ना कमजोरीमा प्रतिद्वन्दी टिमका खेलडीले कहाँ फाईदा लिन सक्छन् । त्यसलाई कसरि पुरा गर्ने भनेर भिडियो हेरिहेरि छलफल गर्छन् ।
बाँकी समय खाना खाने, नुहाउने, पौडी खेल्ने, भिडियो हेर्ने, आराम गर्ने, चिकित्सकसित भेटेर स्वास्थ्यको सल्लाह माग्ने गर्छन् । हरेक दिन केहि केहि रमाईला कुरा गरेर हाँस्ने र हँसाउनेपनि गर्छन् । टिममा नाच्गान गरेर हैँसाउन सिपालु छन्, फ्रान्सेली टिमका चर्चित मिड फिल्डर पोल पोग्बा । टिमका गतिबिधीहरुलाई मेडिया र सामाजिक सन्जाल, अन्य बिभिन्न ठाउँमा साझेदारी गर्न सिपालु छन्, आन्त्वान् ग्रिजमान् ।
बिहिबारको खेलकालागि आफन्त, समर्थक र साथीहरु मंगलवार मस्को पुग्ने छन् । आफन्तहरु पुगेपछि भेटघाटमा अलि समय जान्छ । त्यस अघि फ्रान्सेली खेलाडीहरुले फर्टनाईट, मारियो कार्त, फिफाको भिडियो हेर्छन् । तास खेलेर रमाउने बानीपनि फ्रान्सेली खेलाडीको उस्तै छ । तारो, उनो, ले दे, ल बस्के लगायतका तासका खेल खेल्छन् । कोहि पौडी खेल्न जान्छन् । कोहि टेली सिरियलमा रमाउँछन् । उनीहरु अरु देशको खेल हेर्न रंगशाला जाँदैनन् कि टिभीमै हेर्ने गर्छन् ।
फलामका डल्लाहरु हुत्याएर खेलिने खेल पेताङ्क खेल्दै बारबाक्यु गरेर रमाउँछन् कहिलेकाहिँ । ‘साँच्चै हामीलाई दिक्क लाग्ने समयनै हुन्न । गज्जबको रमाईलो वातावरण स्रिजना भएको हुन्छ’ फ्रान्सेली खेलाडी भारेन फ्रान्सेली मेडियालाई सुनाउँछन् ।
तर अधिकांश समय उनीहरु आफ्नै खेलका बारेमा केन्द्रित हुन्छन् । खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न, खुशि बनाउन प्रशिक्षकले उपहार दिईरहेका हुन्छन् । आफ्नो प्रशिक्षकले दिएको उपहारमा रमाउने, उनका कुरा सुन्ने र प्रशिक्षकको निर्देशन अनुसार खेलको तरिका बदल्नुपर्ने वा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसमा गम्भिर भएर सामूहिक छलफल गर्छन् ।
मंगलबार परिवारका सदस्य र साथीहरु आउँने हुँदा तिसितको भेटघाटमा समय धेरै जान सक्ने भएकाले अहिले फूर्सदका बेलाको अधिकांश समय खेलमा केन्द्रित भएका छन् । ‘सधैं भरि खेलका बारेमा मात्रै केन्द्रित हुनु राम्रो होईन । त्यसैले मैले खेलाडीहरुलाई खेल भन्दा फरक विषयमा सोच्ने, रमाउने र भुलाउनेबारे कोसिस गरिरहेको छु’ विश्व कपमा फ्रन्सेली खेलाडीका साईकोलोजिस्ट सेद्रिक किन्यो भन्छन् ।
२३ मे देखि फ्रान्सेली टोलीले हप्तामा दुई दिन मात्रै ‘फ्री’ बसेका छन् र बाँकी दिन खेलमै ब्यस्त हुन्छन् । अधिकांश समय उनीहरु आफ्नै खेलका बारेमा केन्द्रित हुन्छन् । हप्तामा दुई दिन फूर्सदमा बसेर बाँकी पाँच दिन नियमित खेल्ने अति कम देशका खेलाडी मध्ये पर्छ, फ्रान्सेली टोली । खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न, खुशि बनाउन प्रशिक्षकले उपहार दिईरहेका हुन्छन् । आफ्नो प्रशिक्षकका कुरा सुन्ने र उनको निर्देशन अनुसार खेलको तरिका बदल्नुपर्ने वा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसमा गम्भिर भएर सामूहिक छलफल गर्छन् ।
खेलाडीहरुपनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ । त्यो अनुशासन अन्य पेशा, रोजगारीमा बस्नेको भन्दा कम होइन अझ बढि पालना गर्नुपर्छ भन्ने खेलाडीहरुले अनुभव गरेको फ्रान्सेली कोच डिडिए देशँले बताएका छन् । त्यो अनुशासनमा बसेर विश्व कपका लागि आवश्यक सबै सुविधा र चाँजो मिलाउन उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।